Zvombo zveShomwe - Wikipedia
Zvombo zveShomwe (Nuclear Weapons) imhando yebhomba rinoputika richishandisa rupinguro rweshomwe yehatomu, uku kungava kushanduka kwemutowo wekubanzuka kweshomwe (nuclear fission) yehatomu kana kunyenguka kweshomwe (nuclear fusion) yehatomu. Nokumwe kutaura tinokwanisa kuti zvombo zveusomo. Hondo yeZvombo zveShomwe yakarwiwa kamwe apo United States of America yakadonhedza zvombo zveshomwe pamaguta eHiroshima neNagasaki kuJapan mugore 1945.
Kubvira pakadhuurwa mabhomba kuHiroshima neNagasaki, zvombo zveshomwe zvadhuurwa panhambo dzinodarika zviuru zviviri (2,000) nechinangwa chokuwongorora mashandiro uye kuratidzira ezvombo izvi. Nyika dzine zvombo zveshomwe kana dziri dzinozivikanwa kuti dziri kuzvitsvaga inyika shomane. Nyika dzinozivikanwa kuti dzakadhuura zvombo zveshomwe dzinosanganisira: United States, Soviet Union (Russia ndiyo yakagamuchidzwa zvombo zveshomwe), United Kingdom, France, China, India, Pakistan, neNorth Korea. Kune kufungidzira kuti Israel ine zvombo zveshomwe asi iyo Israel yaibvume kuti ine zvombo izvi. South Africa yakambenge yagadzira zvombo zveshomwe, asi kunonzi panguva yakanga yofa hutongi hwerusaruraganda zvombo izvi zvakagurunurwa, mushure mokunge South Africa yagamuchira Chibvumirano Chekumisa Kutekeshera kweZvombo zveShomwe.
1 Kurerutsa Mutauro
2 Mhando dzezvombo zveshomwe
3 Zvombo zveBanzura Shomwe
4 Zvombo zveRunyengutsa Shomwe
Izwi rokuti nucleus rakabva pazwi reLatin rokuti nuc rinoreva little nut, kernel or core - apa kuchirehwa chikamu chenzungu chakapfava, chinodyiwa, chisiri mateko. Saka pano kuturikira kernel kuChiShona tinenge toti shomwe kana kuti usomo. Shomwe kana kuti usomo zvinoreva mhodzi dzinowanikwa mukati memateko enzungu kana pakati petsongoro pamichero yakadai sehacha kana pfura - idzi dziri mhodzi dzakapfava uye dziine mafuta.
Mhando dzezvombo zveshomweEdit
Zvombo zveBanzura ShomweEdit
Zvombo zveshomwe zvose zviriko zvinowana simba rekudhuuka kubva parubanzura shomwe.
Zvombo zveRunyengutsa ShomweEdit
Imwe mhando yezvombo zveshomwe ndeizvo zvinoburitsa simba razvo kubva paRunyengutsa Shomwe.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Zvombo_zveShomwe&oldid=54702"
Last edited on 14 Ndira 2018, at 03:17
This page was last edited on 14 Ndira 2018, at 03:17.